Lutris: Waa macmiil ciyaar wanaagsan oo cusbooneysiiyay GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Lutris: Waa macmiil ciyaar fiican oo cusbooneysiiyay GNU / Linux
Sidaan ku aragnay 2 daabiciddii ugu dambeysay, midna gamehub iyo mid kale oo ku saabsan Itch.io, Bixinta xalalka (macaamiisha / barnaamijyada) ciyaaraha GNU / Linux wuu korayaa wuuna sii xoogaysanayaa. Iyo halyeeyga Lutris waxaa jira, in tartanka si ay u sameeyaan GNU / Linux heer sare ah Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay taageerayaasha videogames.
Lutris, sida kuwa kale macaamiisha ciyaarta ee GNU / Linux, waxay bixisaa marin u fududahay buuga weyn ee sii kordhaya ee videogameslaga bilaabo labadaba Retro, khadka tooska ah, ama duugga ah iyo kumbuyuutarrada casriga ah, fudud ama ciyaartoy badan. Taasna, isaga laanta hadda (0.5.X) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si raaxo leh ugu socodsiiso ciyaar kasta hal interface oo aad dhexgasho dukaamada kale sida Juujow y Steam, si aad u soo dhoofsato maktabadda ciyaarta ee hadda jirta iyo qoraallada rakibidda ee loo baahan yahay.
Sida lagu sharaxay, qaab fudud oo ah a qoraal hore oo ku saabsan Lutris, ayaa yiri arjiga waa:
"Madal furan oo loogu talagalay Linux ayaa lagu sameeyay python 3, taas oo noo oggolaaneysa inaan rakibno oo maamulno cayaaraha Linux-u-habboon qaab fudud iyo jawi midaysan. Qalabkani wuxuu bixiyaa taageero loogu talagalay cayaaraha Linux-ka iyo sidoo kale emulators Windows iyo ciyaaro lagu ordi karo iyadoo la adeegsanayo khamri. Sidoo kale, waxay leedahay taageero ballaaran oo loogu talagalay Playstation, ciyaaraha Xbox, iyo kuwo kale.".
Laakiin, Lutris ma aha wax fudud Macaamiilka Desktop-ka ee ciyaaraha, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay a degel rasmi ah kaasoo u dhaqma sidii a dukaanka (suuqa) ee codsiyada iyo / ama ciyaaraha, kaas oo ku habboon barnaamijka macaamiisha desktop, si u oggolow, fududee oo dedejin, qaabeynta iyo rakibidda cayaaraha Oo isku mid ah. Aad u qaab ah Steam.
1.1 Waa maxay Lutris?
1.2 Sifooyinka madal
1.3 Rakibaadda Codsiga
1.3.1 Ku rakibida boosteejada
1.3.2 Diiwaangelinta koontada internetka
1.3.3 Isticmaalka Lutris
1.3.4 Ciyaar rakib
1.3.5 Ciyaar orod lagu rakibay
Waa maxay Lutris?
Lutris waa macmiil desktop iyo madal ciyaaraha loogu talagalay il furan waayo, GNU / Linux, taas oo fududeyneysa howlaha lagu ciyaaro iyada oo loo marayo maamulka, rakibidda iyo qaabeynta qaab ciyaareedka ugu fiican.
Lutris ma iibiyo ciyaaraha. Waxay bixisaa marin u helka ciyaar bilaash ah, furan oo bilaash ah. Ciyaaraha ganacsiga, waa inaad haysataa nuqul aad ku rakibto ciyaarta Lutris. Intaa waxaa dheer, madalku wuxuu adeegsadaa barnaamijyo loo yaqaan "Orodyahannada" Si aad u bilowdo ciyaaraha, Dukaanleydan (marka laga reebo Steam iyo daalacashada shabakadaha) waxaa bixiya oo maamula Lutris, sidaa darteed uma baahnid inaad ku rakibtid iyaga maamulaha xirmadaada.
Xarumaha Lutris si buuxda otomaatig ahaan loo maro qoraallo, kaas oo lagu qori karo JSON ama YAML. Xisaabaadka ikhtiyaariga ah ayaa lagu abuuri karaa bogga rasmiga ah kuna xidho iyaga iyo macaamiisha Lutris. Tani waxay u oggolaaneysaa macmiilkaaga inuu si otomaatig ah isugu dubbarido maktabadda raadinta bogga. Xilligan waxaa suurtagal ah in la waafajiyo koontada (maktabadda) Steam maktabada leh Lutris.
Macmiilka Lutris waxay kaydisaa oo keliya calaamadda marka aad ku xiranto websaydhka, iyo aqoonsigaaga soo galida waligaa lama keydin. Adeegsiga qoraallo, waad ciyaari kartaa ciyaaraha adigoon ubaahanayn sameynta gacanta. Iyo ugu dambeyntii, Lutris 100% bulshada ayaa taageersan, si loo xaqiijiyo horumar isdaba joog ah oo mashruuca ah, sidaa darteed markasta u fur fur deeqaha tooska ah ama loo maro Barxadda Patreon.
In soo dejiso qaybta bogga rasmiga ah de Lutris, waxaad si cad u arki kartaa siyaabaha kala duwan ee loo rakibo noocyada kala duwan GNU / Linux Distros. Xaaladdeenna, sidii caadiga ahayd rakibaadda ayaa lagu soo bandhigi doonaa MXLinux 19.1 (DEBIAN 10.3).
Hoos Nidaamka rakibaadda iyo isticmaalka Lutris:
Ku rakibida boosteejada
Diiwaangelinta koontada internetka
Ciyaar orod lagu rakibay
Sida aad arki karto, rakibidda iyo adeegsiga Lutris Waa wax aad u fudud, oo buugga ciyaaraha bilaashka ah, furan iyo bilaashku maahan oo keliya laakiin sidoo kale wuu sii kordhayaa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan taageerada weyn ee ay u hayaan horumarinta ciyaarta fiidiyowga iyo «Comunidad de Software Libre y Código Abierto». Iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Lutris goobta rasmiga ah waxaa laga heli karaa GitHub.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Lutris dayac tiray oo heer sare ah «Cliente para juegos» ku saabsan Nidaamyada Hawlgalka Bilaashka ah iyo Furfuran, oo waliba leh barxad websaydh aad u fiican iyo ciyaaro aad u tiro badan oo la heli karo, waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Lutris: Waa macmiil ciyaar fiican oo cusbooneysiiyay GNU / Linux
Way fiicnaan laheyd haddii ay taageerto barnaamijyada
Jawaab Nasher_87 (ARG)
Haa, waxay noqon laheyd wax cajiib ah.
Monado, oo ah meel laga helo ilo furan oo loogu talagalay aaladaha runta ah
Nooca cusub ee Go 1.14 waa kan waana kuwan wararkiisa